UMongameli Robert Mugabe uvule ngokusemthethweni isigaba sesihlanu esokucina kulelidale lephalamende esikhangelelwe ukuba sizokuba ngesifitshane njengoba sokubangwa kukhetho luka 2018.
Abammele izigaba ezehlukeneyo bamukele ngenjabulo amazwi kaMugabe wokukhuza abaphathintambo abaqholozayo, abengezi edale lephalamende lalapho kumele bazokupha ubufakazi kokwenzakala kungatsha zabo.
Amalunga alelidale ahlezi ekhala ngokuthi abaphathintambo abazihluphi ukuza edale ukuzachasisa ngeziphathelene lengatsha zabo.
Ummeli weGwanda Central, owangena nge Proportional Representation ngaphansi kwebandla le MDC-T, uNkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthe akamangaliswa ngokwenza kukamongameli, ongazange atsho lutho, ngodaba lokulungisiswa kwemithetho elawula ngezokhetho elizweni, ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnu. Themba Khumalo, usole ibandla eliphikisayo ele MDC-T, esithi yilo eliyekethisa lapho kumele bamfuqe ngamandla,uhulumende weZanu,ekulungisisweni kwemithetho ephathelane lezokhetho.
Usole njalo lenkulumo kaMongameli Mugabe, esithi okumqoka uzulu obekukhangelele, ukufezwa yiphalamende le, okumunyethwe yisisekelo sombuso, okubalisa udaba lokunikeza amandla ezigaba kunkokheli yazo, iDevolution akwenzakalanga.
Okunye obekukhangelelwe ukuba uMugabe, aphathe ngakho yimithetho efana lowe Public Health Act, wona osule sikhathi ukhalwa ngawo ukuba lokhe ungakaguqulwa selokhu wabunjwayo ngomnyaka ka 1924.